ဂပြနျတှငျ မုနျတိုငျး ပွငျးထနျနသေျောလညျး အောငျလပှဲကို မဖကျြသိမျးဟုဆို - MM Live News
ဂပြနျတှငျ မုနျတိုငျး ပွငျးထနျနသေျောလညျး အောငျလပှဲကို မဖကျြသိမျးဟုဆို
October 12, 2019 October 12, 2019 MM Live
ဂပြနျနိုငျငံ တိုကြိုမွို့တျောမှာ အငျအားပွငျး တိုငျဖှနျး မုနျတိုငျး တဈခု အခု ရကျသီတငျးပတျကုနျ ရကျတှမှော ဝငျဖို့ ရှိပမေယျ့ ONE ခနျြပီယံရှဈ ကိုယျခံပညာ သိုငျးပေါငျးစုံ ပွိုငျပှဲရဲ့ ရာပွညျ့ အထူးပှဲကို စီစဉျထားတဲ့ အတိုငျး အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကငျြးပမယျလို့ ONE ခနျြပီယံရှဈရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ Chatri Sityodtong က သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ ဖစျေ့ဘှတျချ စာမကျြနှာမှာ အောကျတိုဘာ ၁၁ ရကျနေ့ ညပိုငျးက ကွညောလိုကျပါတယျ။
အဲဒီပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာပွညျကိုယျစားပွုပွီး မွနျမာ့စပါးအုံးမွှေ အောငျလအနျဆနျနဲ့ ဘူရှီဒို ဖိုးသျော တို့က ယှဉျပွိငျကွဖို့ ရှိနတောပါ။တိုငျဖှနျး ဟာဂြီဘဈဈ (Hagibis) လို့ အမညျ ပေးထားတဲ့ အငျအားပွငျး မုနျတိုငျးဟာ တဈနာရီ မိုငျ ၁၁၁ အထိ လပွေငျးအား ရှိနိုငျပွီး နှဈ ၆၀ အတှငျးမှာ အပွငျးထနျဆုံး မိုးကွီး ရလြှေံ၊ မွပွေိုမှုတှေ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဂပြနျ မိုးလသေဝဌာက ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျ စနနေေ့ (ဒီနေ့) မနကျပိုငျးက စပွီးတော့ မုနျတိုငျး ကနဦး အဖွဈ မွို့တျော တိုကြို အပါအဝငျ နရော အတျောမြားမြား မှာ မိုးကွီး လထေနျနပေါတယျ။ဒါပမေယျ့ ONE ခနျြပီယံရှဈရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌရဲ့ လူမှုကှနျရကျ ထုတျပွနျခကျြမှာတော့ ONE အနနေဲ့ အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ ဖမျးယူနတေဲ့ ကောငျးကငျ ဂွိုဟျတု ပုံရိပျ နညျးပညာ အကူအညီနဲ့ အတူ ကြှမျးကငျြသူ တှေ၊ အတှအေ့ကွုံ ရှိ ဒသေခံတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီး ဒီပွိုငျပှဲကို စီစဉျထားတဲ့ အတိုငျး ကငျြးပဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။
ပှဲကငျြးပမယျ့ တနင်ျဂနှေ မနကျပိုငျး ကရြငျ တိုကြိုမှာ ရာသီဥတု ပုံမှနျ ပွနျ ဖွဈလာမယျလို့ ခနျ့မှနျးရတယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။ ONE Century လို့ အမညျပေးထားတဲ့ စငျကာပူ အခွစေိုကျ ONE ခနျြပီယံရှဈရဲ့ ပှဲ ၁၀၀ ပွညျ့ အထိမျးအမှတျ အထူးပှဲကို အပိုငျး (၁) နဲ့ (၂) ဆိုပွီး မနကျပိုငျး၊ ညနပေိုငျး ခှဲပွီး ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားတာပါ။
အခု မုနျတိုငျးဟာ လူပေါငျး ၁,၂၀၀ ကြျော သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ ၁၉၅၈ တုနျးက ဖွဈခဲ့တဲ့ မုနျတိုငျး နောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး မုနျတိုငျး တဈခု ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ဂပြနျ တာဝနျရှိသူတှကေ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။Baganthar
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်မှာ အင်အားပြင်း တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း တစ်ခု အခု ရက်သီတင်းပတ်ကုန် ရက်တွေမှာ ဝင်ဖို့ ရှိပေမယ့် ONE ချန်ပီယံရှစ် ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရာပြည့် အထူးပွဲကို စီစဉ်ထားတဲ့ အတိုင်း အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Chatri Sityodtong က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုပြီး မြန်မာ့စပါးအုံးမြွေ အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ဘူရှီဒို ဖိုးသော် တို့က ယှဉ်ပြိင်ကြဖို့ ရှိနေတာပါ။တိုင်ဖွန်း ဟာဂျီဘစ်စ် (Hagibis) လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ အင်အားပြင်း မုန်တိုင်းဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၁၁၁ အထိ လေပြင်းအား ရှိနိုင်ပြီး နှစ် ၆၀ အတွင်းမှာ အပြင်းထန်ဆုံး မိုးကြီး ရေလျှံ၊ မြေပြိုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဂျပန် မိုးလေသဝဌာက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် စနေနေ့ (ဒီနေ့) မနက်ပိုင်းက စပြီးတော့ မုန်တိုင်း ကနဦး အဖြစ် မြို့တော် တိုကျို အပါအဝင် နေရာ အတော်များများ မှာ မိုးကြီး လေထန်နေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ လူမှုကွန်ရက် ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ ONE အနေနဲ့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖမ်းယူနေတဲ့ ကောင်းကင် ဂြိုဟ်တု ပုံရိပ် နည်းပညာ အကူအညီနဲ့ အတူ ကျွမ်းကျင်သူ တွေ၊ အတွေ့အကြုံ ရှိ ဒေသခံတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်ထားတဲ့ အတိုင်း ကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ပွဲကျင်းပမယ့် တနင်္ဂနွေ မနက်ပိုင်း ကျရင် တိုကျိုမှာ ရာသီဥတု ပုံမှန် ပြန် ဖြစ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ONE Century လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စင်ကာပူ အခြေစိုက် ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ ပွဲ ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးပွဲကို အပိုင်း (၁) နဲ့ (၂) ဆိုပြီး မနက်ပိုင်း၊ ညနေပိုင်း ခွဲပြီး ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။
အခု မုန်တိုင်းဟာ လူပေါင်း ၁,၂၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၁၉၅၈ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်း နောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး မုန်တိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဂျပန် တာဝန်ရှိသူတွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။Baganthar
ရန်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူး တစ်ခါတစ်လေ သည်းခံတယ် အခုကသတ်သတ်လာရမ်းကားလို့ သည်းခံမူကျော်သွားတယ်
September 2, 2018 September 3, 2018 MM Live News
ကျောင်းကုန်းမြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်…
April 1, 2019 MM Live
Chinese tourists are driving the durian boom. Thailand is one of the most popular tourist destinations for Chinese travelers, with nearly 10 million visiting in 2017.
August 11, 2018 MM Live News